I-Super Mario Run ngoku iyafumaneka kwiVenkile ye App | IPhone iindaba
I-Super Mario Run ngoku iyafumaneka kwiVenkile ye App
ULuis Padilla | | IPhone imidlalo, Izaziso
Ukulinda kugqityiwe, kwaye emva kweenyanga ezininzi kulindwe owaziwa kakhulu kumdlalo wevidiyo kwimbali ukufika kwi-iPhone yethu, iSuper Mario ngoku ikwiVenkile ye App ekulungele ukukhuphela kwi-iPhone yakho nakwi-iPad. Emva kokuphikisana kakhulu neNintendo kwizixhobo eziphathwayo, ekugqibeleni wagqiba kwelokuba asungule esona sihloko sakhe sidumileyo sokudlala kwi-iPhone nakwi-iPad., kwaye ikwenza okokuqala kwizixhobo zeApple, ishiya ii-smartphones ze-Android kumaza wesibini aya kufika ngo-2017, ngaphandle komhla othile. Ngaba uyafuna ukukhuphela enye yeyona midlalo ilindelweyo yonyaka? Ewe, apha ngezantsi sikunika ikhonkco kunye nalo lonke ulwazi onokulufuna.
ISuper Mario Run igcina yonke ingqokelela yemidlalo yoqobo, kunye nemizobo ehlengahlengiswe ngokugqibeleleyo kwiscreen seRetina yezixhobo zeApple, kunye nenkqubo yolawulo etshintsha ukuchukumisa izikrini, into ezinye zeeklasikhi zomdlalo wevidiyo ezingakhange zikwazi ukuyiphumelela kulungelelwaniso lwee-smartphones . I-Super Mario Run i «imbaleki engapheliyo» apho uMario engayeki ukubaleka kwiscreen kwaye ngesandla esinye unokulawula ukutsiba kwakhe ukufikelela kwamanye amaqonga, ukufumana iingqekembe zemali kunye namanye amandla okunyusa, kwaye ke ukufikelela esiphelweni kwinqanaba ngalinye ngaphandle kokubhenela "kulawulo olubonakalayo" olunika iziphumo ezibi kwezi zikrini.
Njengayo nayiphi na imveliso edala ukulindelwa okungaka, impikiswano ayikhange ibekho, kwaye ukugijima kweSuper Mario kugxekiwe ngexabiso layo, ukusukela oko Nangona simahla kumanqanaba okuqala, kuya kufuneka uhlawule i-9,99 ye- € kwintengo enye edibeneyo ukuvula wonke umxholo kumdlalo. Ukongeza, ukufuna uqhagamshelo lwe-intanethi oluqhubekayo lokudlala alwamkelwanga kakuhle ngabasebenzisi abaninzi abazisolayo ngokungakwazi ukonwabela kwinqwelomoya okanye kwi-iPad ngaphandle koqhagamshelo lwe-3G okanye iWiFi. Ngaphandle kwayo yonke into, impumelelo ingaphezulu kokuqinisekiswa.
Umendo opheleleyo kwinqaku: IPhone iindaba » Iapps zokusebenza » IPhone imidlalo » I-Super Mario Run ngoku iyafumaneka kwiVenkile ye App
Ndiyikhuphele ngaphandle kodwa usetyenziso aluvuleki ngenxa yokuba ndine-jailbreak xD nasiphi na isisombululo? (Ngaphandle kokuphulukana ne-xbreak yejele)
Phendula ku Kurama
kuba ios 9 ayivuleki, nokuba kungathiwa yijele okanye ngaphandle kwayo
Ndihlala ndifumana ukuba baya kundazisa xa ukhuphelo lukhona…. kwaye ukuza kuthi ga ngoku akukho nto !!!
Nqontsonqa (@nonkqayi) sitsho
Kwenzeka into efanayo kum, ayivuli, iyatsiba. inokuba kungenxa yentolongo ?????? Andicingi ukuba noooo
Phendula kuMarcos Cuesta (@marcueza)
Ndisifumene isisombululo sentolongo ... sele isebenza kum.
Kuya kufuneka ukhuphele i-TSPROTECTOR 8+ kwi-cydia, ubeke usetyenziso lwe-mario kuluhlu lwabamnyama, kwaye ukulungele ukuhamba, kuyamangalisa hehehe
Ngaba lo mdlalo ungabelwana nosapho kunye neakhawunti ekwabelwana ngayo ye-Applemusic?
Awuyi kuvula kwi-ios 10.1.1 kwi-iPad Air 2 ngaphandle kwejele
ooo ewe ndoda isebenze enkosi
Ndiyikhuphele kwaye inyani kukuba andiboni ukuba ngumdlalo ukuhlawula i-9,99 yeerandi ngayo, ngokuthe ngqo ndiyibeka kwaye ndadlula kwinqanaba kwaye ndiyicimile, utsiba yonke into ngokuzenzekelayo
Ikhutshelwe kwaye icinyiwe… bendilindele okungakumbi kuMario nakuNintendo kodwa ndaphela ndidanile ngohlobo lwasimahla lomdlalo.
Ndiyikhuphele umdlalo kwaye iyonwabisa kakhulu. Ndicinga ukuhlawula iidola ezili-10 ukuvula yonke into, umbuzo ngulo ulandelayo, ukuba ndibhatala ukuvula, ngaba ndingabelana ngomdlalo nentombi yam ngaphandle kokuhlawula? Nokuba ndiyifaka nge-AppleID yam okanye ngenye indlela. Enkosi.
Kulabo abangasebenziyo umdlalo kwizixhobo ezineJailBreak, njengomntu okhankanywe apha ngasentla, faka i-tsProtector +8 esuka eCydia kwaye ubeke umdlalo kuluhlu olumnyama kwaye uza kusebenza.
Ayivuli i-iOS 10.0.1 i-iPhone 6s Plus
Uhlelo lokusebenza lwegama elingu-1 lihlaziywa ukuze luvele kwi-Apple Watch
Ingqalutye yazisa ukuba iiwotshi ezikhoyo ziya kuqhubeka nokusebenza